सेवा प्रालिले ४ लाखमै यस्तो घर बनाई दिने ! इटहरी र कोहलपुरमा सस्तो हाउजिङ निर्माणाधीन ! – Etajakhabar
काठमाडौं – उपत्यका केन्द्रित भएर दर्जनौं हाजजिङ परियोजना बनिसकेका छन् भने अहिले पनि थुप्रै निर्माणाधीन छन् । यहाँका अधिकांश परियोजनाका घर उच्च आयवर्गलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ, जुन सामान्य आय भएका व्यक्तिले खरिद गर्न गाह्रो छ । न्यून तथा निम्नमध्यम आय हुनेले घर आफूले बनाउन पनि नसक्ने र यस्ता हाउजिङ परियोजनामा किन्न पनि नसक्ने स्थिति छ । त्यस्तो आयस्तर हुुनेका आफ्नै घरको सपना पूरा गर्ने सोचले स्थापित ललितपुरस्थित सेवा प्रालिले अहिले काठमाडौंबाहिर इटहरी र कोहलपुरमा आवास परियोजनाको थालनी गरेको छ ।
सेवा प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक समा बज्र भन्छिन्, ‘मध्यम तथा निम्न आयका परिवारलाई आर्थिक भार कम पर्ने गरी कसरी घर बनाइदिन सकिन्छ भन्ने अध्ययनमै हामीले दुई वर्ष खर्चियौं । त्यसपछि मात्र काम सुरु गरेका हौं ।’ सोही कारण कम्पनी दर्ता करिब पाँच वर्षअघि नै गरिए पनि सेवाले सन् २०१६ बाट मात्र काम सुरु गरेको उनले बताइन् । कम्पनीले कुनै एक व्यतिmका लागि मात्र नभएर समूहका लागि कम्तिमा २० देखि २५ इकाईभन्दा माथिको संख्यामा घर निर्माण गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय आवास सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु नै कम्पनीको मुख्य उद्धेश्य रहेको बज्रको भनाइ छ । ग्राहकको हैसियत, आवश्यकता र रुची अनुसार तयारी गुस्तरीय घर, सुलभ मूल्यमा इच्छाअनुरुपको घरको डिजाइन तथा निर्माण लगायतका सेवा कम्पनीले दिँदै आएको छ । ग्राहकले इच्छाएको घरका लागि पर्न आउने लागत हिसाब गरेर उसको आम्दानीले भ्याउँछ भ्याउँदैन वा कस्तो घर बनाउँदा सहज हुन्छ र बजेटले पुग्छ भन्ने लगायतका परामर्श पनि यस कम्पनीले दिँदै आएको छ । त्यसका आधारमा ग्राहकको प्रतिक्रिया र चाहनाबमोजिम आवाससम्बन्धी सेवा दिने बज्रले बताइन् ।
इटहरी र कोहलपुरमा सस्तो आवास सेवाको इटहरी र कोहलपुर परियोजना अफोर्डेवल (आय सुहाउँदो) हाउजिङको अवधारणामा निर्माणाधीन छ । यद्यपि निम्न तथा मध्यम आयवर्गका आवासीय आवश्यकता एकै किसिमको प्रोजेक्टले सम्बोधन नगर्ने भएकाले कम्पनीले अघि बढाएको परियोजनामा विभिन्न डिजाइनका घरहरुको विकल्प विकास गरिएको छ ।हाउजिङ परियोजनाका घरको मूल्य सम्बन्धित ठाउँको जग्गाको मूल्यमा निर्भर हुन्छ । अर्थात् जग्गा महँगो भएको ठाउँमा बनेको घरमा स्वतः जग्गाको मूल्यसमेत जोडिएर आउँदा घर महँगो पर्न जान्छ । यसैले सेवाले शुरु गरिएका ‘अफोर्डेबल हाउजिङ’ परियोजना सहरको मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा केही बाहिर निर्माण गर्न लागेको बताएको छ । इटहरीको परियोजना चोकबाट २.५ किमी दक्षिणपश्चिमस्थित ‘गैसार’मा बन्दैछ । कोहलपुर परियोजना मैथवा, मदनचोकमा रहेको छ ।
कोहलपुरमा १६ देखि २५ लाख सम्मका कुल १३७ घरहरु निर्माण भइरहेका छन् । ६.३ धुरदेखि ७ धुरसम्मको प्लटमा बन्ने उतm घरहरुको बिल्टअप एरिया ३४८ देखि ६०२ वर्गफिटसम्म हुनेछ । जग्गाको मूल्यका कारण इटहरीको गैसारमा निर्माणाधीन ‘सेवा होम्स – १’ परियोजनाका घर भने कोहलपुरको भन्दा महँगो पर्न गएको छ । ३.६८ बिगाहा जमिनमा बन्ने इटहरीको परियोजनामा ११५ ‘रो हाउजिङ’ र ७१ ‘डुप्लेक्स’ गरी कुल १८६ घरहरु बन्नेछन्, जसको मूल्य ३४ लाखदेखि ४४ लाखसम्म पर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । विल्टअप एरिया ५०९ देखि ९२९ वर्गफिटसम्म छ ।
यस्ता घर बन्नेछन्
छुट्टाछुट्टै घर (सिङ्गल युनिट)ः यो प्रकारको घर एक तलाको रहनेछ । तथापि यसको फाउन्डेसन दुई तलाका लागि हुने गरी बनाइएको हुन्छ । यसैले पछि आवश्यक परे वा घरधनीले चाहेमा अर्को तला थप्न सक्नेछन् । डुप्लेक्सः योे प्रकारको इकाइमा थोरै जग्गामा दुई परिवारका लागि हुने गरी बाहिरबाट हेर्दा एउटैजस्तो देखिने घर बनाइएको हुन्छ । तर प्रवेशद्वार छुट्टाछुट्टै हुनुका साथै भित्रपट्टिबाट पनि घरलाई दुईवटा इकाईमा अलग्याइएको हुन्छ । जसले गर्दा दुई परिवारको बसाईमा ‘प्राइभेसी’ तथा एकअर्कालाई हस्तक्षेप नहुने प्रकारले यस्को निर्माण गरिएको हुन्छ । रो हाउजिङः यसमा एकमुष्ट धेरै घरहरु लस्करै जोडेर बनाइएको हुन्छ । बस्तीको एउटा पूरै ‘रो’ एकढिक्का देखिने यस प्रकारको हाउजिङका सबै घर हेर्दा एकनासका देखिन्छन् ।
परियोजनाका विशेषताः वातावरणमैत्री आवास ,खुला र हरियाली क्षेत्र (५ कठ्ठा १० धुर) , गर्मी र चिसोबाट जोगाउने प्यासिभ सोलार डिजाइन , हावाको प्रवाह तथा उज्यालो प्रशस्त हुने कोठाहरु , खुल्ला एम्पिथिएटर (आकासे पानी जम्मा गर्ने ठाउँ) , हलो कङ्क्रिट ब्लकको प्रयोगबाट निर्मित भुकम्प प्रतिरोधी आवास , नियमानुसार तला थप्न मिल्ने चरणवद्ध आवास निर्माण , सामुदायिक भवन , परियोजनाभित्र दुवैतर्फ नाला भएको २६ फिटसम्म फराकिलो बाटो , सबै घरमा बिजुली, खानेपानी र ढलको राम्रो व्यवस्था
सेवा प्रालिले हाउजिङ परियोजनालाई वातावरणमैत्री र भूकम्प्रतिरोधी बनाउन निर्माणाधीन घरहरुमा इँटको सट्टा कङ्क्रिट ब्लकको प्रयोग गरेको छ । ती ब्लकमा उच्च गुणस्तर र मजबुती कायम गर्न सेवाले परियोजनास्थलमै मेशिन लगरे आफैंले उत्पादन गर्ने जानकारी बज्रले दिइन् । फलामे रड प्रयोग गरेर कङ्क्रिट ब्लकलाई थप बलियो बनाइएको हुन्छ । घरहरु पूर्णरुपमा भवन निर्माण मापदण्डबमोजिमका रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्माण समाग्रीमा पनि कुनै सम्झौता नगरी गुणस्तरीय वस्तु प्रयोग गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
औकातअनुसारको घर आवासका लागि पारिवारिक आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म खर्च ‘अफोर्डेबिलिटी’ (औकात) भित्र पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । अर्थात् आम्दानीको ३० प्रतिशत खर्च गरेर लिन सकिने आवास ‘अफोर्डेबल’ हो, चाहे त्यो भाडाको होस् या आफ्नै घर । ‘घर बनाउन आम्दानीको त्यो अनुपातभन्दा बढी खर्च नहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य चाहना हो,’ बज्र भन्छिन्, ‘ताकि अन्य घरायसी खर्च धान्न परिवारलाई सहज होस् ।’ आफ्नै जग्गा हुने तर आम्दानी अति न्यून भएकालाई लक्षित गरेर सेवाले ४ लाख रुपैयाँमा पनि घर बनाइदिने गरेको उनले बताइन् । यसका लागि लक्ष्मी बैकसँंग कम्पनीले सहकार्य गरेको छ । बैंकले उपभोक्तालाई रू. ४ लाखको कर्जा उपलब्ध गराउँछ ।
यसअन्तर्गत बनाइने घरलाई कम्पनीले ‘कोर हाउजिङ’ भनेको छ, जसको निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग सेवाले निःशुल्क दिने गरेको छ । तर यो प्राविधिक सहयोगभित्र प्लाष्टर, रङ्गरोगन, मार्वल फ्लोरिङ लगायत फिनिसिङका कुराहरु समावेस गरिएको हुँदैन । कम्पनीले ४ लाख रुपैयाँमा घरको ३ कोठे संरचना मात्र तयार पारिदिने छ । साभार प्रोपर्टीटुडेबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ११, २०७५ समय: १२:३०:१७